Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Fact
musha NYAYA DZEEEOPEAN Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. Mufananidzo Chikwereti: GetfootballNewsFrance uye TransferMarket
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inozivikanwa zvikuru se "Neal". Yedu Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekumuka kweNeal Maupay. Mufananidzo Credits: OGCNice, GetFootballNewsFrance, SkySports uye TheSun
Kuongorora kwacho kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, dzidzo / basa rekuvaka, hupenyu hwebasa repakutanga, nzira yekurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ane ziso rakasimba rekurova zvinangwa uye pasina mubvunzo ari mumwe wevatambi vakuru vanotevera muFrench Soccer. Nekudaro, vashoma vashoma vanoona shanduro yedu yeNeal Maupay's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Neal Maupay akaberekwa pazuva re14th raAugust 1996 kuna amai veArgentina uye baba veFrance mubazi reFrance Yvelines iri panharaunda yeParis, France.
Maupay ane mhuri yake kubva kuguta rakanaka reVersailles iro riri 17.1 km kubva kuParis guta repakati. Kare ikako, mhuri yake yaigara muVersailles- mumwe wemapfuma pasi peParis. Versailles iguta rinozivikanwa neminda yaro yakasarudzwa neUNESCO seNyika Yepasi Pese. Pazasi pane kunaka kwekuona kweguta Neal Maupay aive nekutanga kwake kwekuzvininipisa.
Neal Maupay Upenyu hwepakutanga- Akapedza makore ekutanga e4 kuguta rake rekuzvarwa, Versailles kunobva mhuri yake. Chikwereti: GardenVisit uye frenchmoments
Kunyangwe akazvarwa muFrance, Neal Maupay zvakare ane midzi yemhuri yeArgentina nekutenda kunaamai vake vakatamira kuFrance uko kunova mukadzi wababa vaNeal Maupay. Panguva yaamai vaMaupay vaitarisira imba, baba vake vaizvipira kuna a basa rehurumende iyo yakatora nzvimbo isina kunangana muhupenyu hwaNeal Maupay hwepakutanga uye kukura kwebhola.
Kuendeswa kweHurumende chinhu chinowanzoitika kune vashandi vehurumende. Mugore re2001, nhau dzakasvika kuna baba vake kuti akaendeswa kuVersailles kuenda kune rimwe remapazi ake ebasa muCôte d'Azur, dunhu rekutonga riri muSoutheast France.
Sarudzo yemhuri yeMaupay yekutama yakatorwa mukutenda kwakanaka uye mudiki Neal (ane makore 5) padivi pevabereki vake akatamiswa nekufamba pamusoro pe880.0 km kuenda kuCôte d'Azur. Yaive muCôte d'Azur kuti mukomana mudiki aikanda zviroto zvake zvebhola.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Pazera re6 mugore 2002, mukomana mudiki akawana rudo rwake rwuri-Kutamba Nhabvu". Neal yekutanga kwebhola nhabvu akaona vabereki vake vachimunyoresa mune imwe kirabhu diki inonzi Valbonne Sophia-Antipolis. Akatanga kutsvaga kwekutanga kugamuchira bhora rechikoro apo achibudirira kuzvibata nezvidzidzo. Nekuda kwekuremerwa nekuchikoro panguva iyoyo, Maupay aigona chete kutamba mutambo neshamwari mukati mevhiki.
Kunyangwe kuve chidiki diki yenhabvu yakatangwa Valbonne Sophia-Antipolis akange aine mukurumbira wakanaka aine mamwe mazita makuru muFrance nhabvu. Iyo kirabhu chidiki yakawana mukurumbira mukuvharidzira vadzidzi vavo vakanaka kwazvo kuti vave nemiedzo neOGC Nice, vavakidzani vepedyo. Nekuti Neal Maupay aive Valbonne's mudzidzi wepamusoro, OGC Nice akakwezva kwaari. Kirabhu yakaita zvese zvaida kuti imupinze mune yavo yezve kuyunivhesiti.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Mune gore 2007, Neal Maupay anokwanisa akaona OGC Nice manejimendi inotora iyo yakawedzera mamaira. Shasha iyi scouts yakaenda kumhuri yekwaMaupay kumba kwavo kunyengetedza vabereki vake kuti vatendere mwana wavo kuti avabatanidze. Baba vaNeal Maupay naamai vakagamuchira nemufaro uye mwana wavo mudiki anopinda akachinja kuenda kuNice, kirabhu 30 maminetsi kubva kuchikwata chake chekutanga.
PaNice, Maupay akatanga kutamba kumusoro nekuda kwehuropi hwakakura hwebhola. Kunyangwe asiri mutambi mukuru kana akasimba, akawana mukurumbira wekugara achizvimisa munzvimbo chaiyo uye panguva chaiyo.
Kune magamba, Maupay akavezwa Luis Suarez uyo panguva iyoyo aive mashura neAjax. Akatevedzera maitiro ake ekutamba pagomba, rwiyo rwakamuita kuti asiyane nevamwe vaaidzidza navo. Yakanga iri panguva iyi izvo zvave kuita kuna Neal anofara kuti aive ave kuzobudirira nhabvu.
Neal Maupay akanzwa akasununguka chaizvo kutamba OGC Nice. Image Chikwereti: NiceMatin
Neal Maupay akakura nekusvetuka uye nemiganhu mumakore ake 5 muOGC Nice youth academy. Paakangotendeuka 16, iye akabva angomhanyisa kuti atore siginecha kuchikwata chavo chekutanga. Kusheedzerwa musikana waMaupay muchikwata cheNice chekutanga-timu rukudzo kuona sekumuona kwake achigonesa kuzadzikiswa kwekuve mutambi wechidiki kwazvo kuve muchikwata cheOGC Nice 1st.
Achangobva kufona, 16-makore-makore Maupay akaita kumwe kubudirira pasina nguva. Akave iye 2nd wechidiki pane vese vavariro muLigue 1.
Neal Maupay akave nekubudirira kwakabudirira kupinda muchikwata cheNice chepamusoro. Chikwereti: FranceFootball
Sezvo zvese zvaiita sekunge zvaimufambira, nyowani wekuFrance aisimuka akaziva izvozvo mazuva erima zvechokwadi aive achiuya uye mazuva ake neOGC Nice akaverengerwa.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Iyo Isingatarisirwe Kuwira: Pakutanga, zvese zvakatanga kufamba zvakanaka naNeal Maupay mushure mekupinda kwake muchikwata chechikwata chekutanga. Zvinhu zvakafamba zvakanaka kusvikira akakuvadzwa cruciate ligament kukuvara kwakamubvisa kubva kune wake waaida bhora.
Kupora kubva mukukuvara, Maupay akasangana nemafungiro akasiyana neake sahwira wake- Claude Puel. Akavhunduka achizviona achibudiwa nemunhu aive nemavhiki apfuura akamurumbidza zvisingaperi.
Neal Maupay akangoerekana awira pasi pasi pefariro pasi paClaude Puel. Mufananidzo Chikwereti: Ligue1
Kuita kwaClaude Puel kwakatanga kukanganisa basa rake, pakupedzisira achinja mafungiro ake nezveramangwana rake nekirabhu. “Mwana waNice”Sezvaanowanzo kudanwa akarasikirwa nemoyo murefu mushure mekushandurwa. Akaita sarudzo nemaune kusiya OGC Nice muna Nyamavhuvhu 2015.
Pa 10 Nyamavhuvhu 2015, Maupay akazvisarudzira kuenda kuSaint-Étienne. Mavhiki mashoma mushure mekujoinha, akatanga kuita zvakanaka neclub. Kuita kwake kuSaint-Étienne kunoreva kuti akaita danho chairo rekusiya OGC Nice. Waizviziva here? Neal Maupay anovavarira-kufora gwara pamwe naSanta-Étienne vakamuona achidanwa kumusoro neFrench U19 side.
Kunyangwe kuve nekutanga kwakanaka naSanta-Etienne, Neal Maupay achiri kunzwa kukosha kwekutamba kuEngland. Chikwereti: Instagram
Kugadzirisa Chirongwa cheChirungu: Kushevedzwa kusvika kuFrance U19 nhanho akaona Maupay anodadisa achiremerwa kuti akwire manera etsiva nhabvu. Panguva ino, akatanga kupanga ramangwana rake. Hazvina kutora nguva mwana wechidiki asati atanga kurasikirwa nekufarira muFrance nhabvu. Kamwe kamwe, iye akatanga kukudziridza kwekutamba mukati iyo Premier League.
Maupay akaronga zano raizomuona achienderera mberi nekuyedza chikamu chezasi chechirungu. Akavimba nekukwanisa kwake kushandisa seiyi Chirungu Ligue 2 papuratifomu kuti akwire kukwidza muClub1, iyo Championship uye ipapo, Premier League. Kutanga, Neal Mapuay akabvuma kuyedza tarenda rake nekujoinha English Ligue 2 kirabhu Brest pachikwereti.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira
Zvakanga zvisiri nyore kuti Neal Maupay agare muEngland asina kudzidza mutauro wechirungu. Achitaura nezve chiitiko chakaoma, akamboti;
“Ndakanga ndiri mudiki, uye yaive nguva yekutanga kubuda nyika yangu. NDISINA KUZIVA Mataurirwo echirungu. Ini hapana munhu wandaiziva mukirabhu.
Iniwo handizive chinhu nezveChirungu nhabvu, kana nezveEngland. Ini ndakanga ndisati ndamboenda kuLondon. hazvisi nyore kugadzikana uye kusununguka Kana uchigara netsika itsva. "
Kunyangwe chipinganidzo chemitauro, Maupay akaita zvikuru. Akaenderera mberi kuhwina iyo Nyamavhuvhu 2016 UNFP Ligue 2 Player yeiyo Mwedzi mubairo. Akagamuchirawo mamwe mazita akadai sa Gunyana, Gumiguru naDecember 2016 mutambi wemwedzi mibairo. Mushure mekuita izvi, Neal akafunga kuisa pangozi zvese nekujoinha Championship nhabvu Brentford uyo akamusayina zvachose.
Maupay akatanga zvakanaka neBrentford sezvo iye akabva ave mutungamiriri wavo wekupedzisira. Kuita kwake mumwaka we2018 / 2019 kwakamuona achiwana mibairo inotevera yekuremekedza iyo; (1) Iyo 2018 Nyamavhuvhu PFA Fans 'Makwikwi eMwedzi, (2) Iyo 2018 Gunyana EFL Makwikwi eChikwata cheMwedzi weMubairo, (3) Iyo 2018 / 2019 Brentford Supporters Player yeGore mubairo uye (4) Iyo 2018 / 2019 Brentford Players 'Mutambi weGore mubairo.
Rwendo rwaNeal Maupay muChirungu Junior League pakupedzisira rwakabhadhara. Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter
Maupay akazivisa chimiro chake chechirungu chakaderera mumutambo weChirungu nekuhwina mubairo unonyanya kukosha. Waizviziva here? Maupay akakunda muLondon Soccer Awards (2018 / 2019 EFL Player yeGore), achisimbisa nzvimbo yake semutambi mukuru anotevera muFrance nhabvu. Seizvo vateveri vazhinji vangatarisira, kuhwina mutambi we2018 / 2019 EFL yegore gore zvakaita kuti akurumidze kukwira kuchikwata chePremier.
Neal Maupay Rise kune Mukurumbira Nhau- Ainakidzwa nemukurumbira wekubuda muEFL. Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter
Chaizvoizvo pa5th yaAugust 2019, Maupay akatamira kuPremier League neBrighton & Hove Albion. Panguva yekunyora, mutambi wenhabvu weFrance ari kuve nehupenyu hwakanaka uye achiona zviroto zvake zvemadimikira zvichizadzika. Akabatanidzwa mumitambo-yekukunda nguva yakawandisa yaBrighton zvakanyanya, achisimbisa nzvimbo yake muchikwata chechikwata.
Neal Maupay- Kuve nehupenyu hwakanaka naBrighton. Image Chikwereti: BBCFootball
Pasina kupokana, isu vateveri venhabvu tingave tiri padanho rekuona mumwe mwana wechidiki wechiFrench achiputika mukoridhe repasi rose pamberi pedu chaipo. Vamwe vese, sezvavanotaura, yave nhoroondo.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nokusimuka kwake mukurumbira uye kukwira muChirungu pamusoro-kubhururuka, zviri chokwadi kuti vamwe vateveri venhabvu vanofanirwa kuve vakafungisisa nezve kuziva zvimwe nezvaMaupay, semuenzaniso, kana aine musikana kana mukadzi. Hapana kuramba chokwadi chekuti kutaridzika kwake kwakanaka pamwe chete nemhando yake yekutamba zvaisazomuisa seanove nhamba pane anokwanisa kuzoita musikana wekuchenjera.
Ndiani Neal Maupays Musikana musikana? Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram
Mushure mekutsvagisisa kwakawanda paInternet, Inoratidzika panguva yekunyora, Neal Maupay akaita danho rekuziva kusaratidza musikana wake kana mukadzi (ndiko kuti kana akaroora kare. Zvimwe anogona kunge ari iye Neal asina kuroorwa asina WAG.
Vazhinji nhabvu inofarira kudzivirira vasikana vavo kubva kuma media nekuda kwekuti nhabvu yeChirungu inogona kuregererwa zvakanyanya kana nyaya dzebasa uye dzehukama dzikasagadziriswa zvakanaka. Izvi zvinogona kunge zviri izvo zveNeal Maupay.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva Hupenyu hwaNeal Maupay kwaizobatsira kuwana mufananidzo uzere hwehunhu hwake kubva pagomba. Kutanga kuenda, iye arikunyanya wekusurukirwa, iye aratidzira kuti anokwanisa kujairana neChirungu tsika. Maupay mumwe munhu uyo ​​dzimwe nguva anonzwa kuda kuve ega uye kure nezvose kuitira kuti adzore simba apa achifunga nezveramangwana rake.
Neal Maupay Yemunhu Hupenyu Chokwadi. Kiredhiti DailyMail
Iye ari mupfana anotonhora uyo anoda kuratidza kuzvininira pasina ma tattoo mukati meiyo mukurumbira wenhabvu yemazuva ano. Maupay ane hushamwari uye anoita NOT vane alpha hunhu hunhu. Haasi brash, ane chivimbo chakanyanya uye anotsigira. Maupay ari pamusoro-pekuzvipira kudzidza mutauro wechirungu, waimbove wakamuona achitora yake achifara MacBook Pro Apple laptop kumabasa ehunyanzvi.
Kuziva Neal Maupay Hupenyu hwega kubva padanho. Mufananidzo Chikwereti: Instagram uye Twitter
Zvakawanda pahupenyu hwake, Maupay ane munhu akasimba-ane moyo, uyo kana akagadzira pfungwa yake kuti aite chimwe chinhu, anozoenderera mberi achichiita. Semuenzaniso, akambogadzira pfungwa dzake kuti azvimanikidze kusimuka kubva kuchirungu chezasi kuenda kuPremier League kunyangwe akatarisana nemipinganidzo yemitauro netsika.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Mari yakakura yemararamiro ehuremusoro inowanzobatanidzwa nehupenyu hwoumbozha hunowoneka nyore nyore nedzimba huru, mota dzakanaka, uye zvimwe zviratidzo zvehupfumi. Yedu chaiyo Neal Maupay inorodza dhibhaidhi kune hupenyu hwekunze. Isu tine humbowo hwemararamiro ake akareruka. Zvino, nepo vamwe vatyairi vemitambo vachifambisa mota dzinodhura kumitambo yekudzidzira, Maupay anowanzoonekwa aine rake chairo mota Iyo Vespa Scooter.
Kusvika pakuziva Neal Maupay Mararamiro. Image Credits: independent uye Twitter
Neal Maupay anoisa mari kubva muhoro wake wevhiki nevhiki kuti ishandiswe zvakanaka. Munguva yezororo, murume wechiFrench sekucherechedzwa pamusoro anosarudza kushanya wakanaka mafuro emakungwa. Kazhinji, maitiro ake uye zvisarudzo kure-iro-gomba chiratidzo chechokwadi yemararamiro anozvininipisa.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Panguva yekunyora, ruzivo, nezvemhuri dzemhuri yaNeal Maupay harinyore kunyorwa. Nekudaro, chinhu chimwe ndechechokwadi. Iye murume wechiFrench ane midzi yemhuri yeArgentina akabudirira akagadzira chikamu chemhuri yake chaicho kune rusununguko rwemari tese nekuda kwesarudzo yake yekuve wenhabvu.
Neal Maupay zvakare panguva yekunyora akadzivirira mai vake, baba, mukoma nemunin'ina kuti asaziviswe kubva kuFrench neChirungu media. Ivo vangangodaro vane hupenyu hwakanaka muFrance uye vanombouya kuzomushanyira kuEngland. Tine chokwadi chekuti munguva pfupi yaakapa akapa hurukuro yemhuri yakakodzera nenhepfenyuro yeBritain. Iko kutarisa kweNeal Maupay ikozvino kwakarurama Football.
Neal Maupay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Rumwe rutivi Rwake: Kunyangwe iye angave asina kureba uye akakura ASI Maupay aisazova nehanya nekutora kurwa kana kudikanwa kuchisvika, kunyanya kurwisa vechidiki vadziviriri Brandon Williams ndiani akambomira munzira yake.
Brandon Williams naNeal Maupay- Ivo vaviri vasina-nonsense players. Mufananidzo Chikwereti: DailyMail
Yake 3 Idol: Maupay imhando yemutambi anofarira kwete chete Luis Suarez. Iye murume wechiFrench anoisa tarisiro yake kune mbiri dzebhola bhora dzinoti; Sergio Aguero, uye Zinedine Zidane. pachake
“Ndinoedza kukurudzirwa navo vese. Aguero naSuarez vatambi vakasimba kunyangwe nehukuru hwavo. Ivo havasi ivo vakuru kana vakasimba, asi havana kumboregedza chero chinhu pasi. vanogara vari munzvimbo chaiyo panguva yakakodzera.
Iniwo ndakajaira kutarisa bhora saZidane. Ini ndinofarira kutamba panze yakafara kana se nhamba 10, asi chinzvimbo changu chakanakira kurova ”.
Chitendero: Maupay rudzi rwemuridzi wenhabvu akaonekwa akadzika achinongedza minwe yake mudenga kuti atende Mwari mushure mekupfura chinangwa. Sezvacherechedzwa pazasi, iye haana nyaya nekuratidza kwake kwechitendero chechiKristu.
Neal Maupay anonongedza minwe yake kudenga mushure mekunyora kwake- Chiratidzo chekutenda kwechitendero. Credits: Premier League, brightonandhoveindependence
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu Neal Maupay YeVechidiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
French Moussa Dembele Childhood Nhau Untold Biography Chokwadi
Aaron Connolly Mwana WeChidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Issa Diop Nyaya Yehutano Plus Untold Biography Facts
Ferland Mendy Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Dai 25, 2018